Baaq ay dhalinyarta, haweenka, waayeelka iyo jaamacaduhu u dirayaan Maxkamadda sare, komishanka doorashooyinka, iyo Guurtida: Qalinkii Askar O amir | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » Baaq ay dhalinyarta, haweenka, waayeelka iyo jaamacaduhu u dirayaan Maxkamadda sare, komishanka doorashooyinka, iyo Guurtida: Qalinkii Askar O amir
Posted by admin on October 16th, 2017 08:09 AM | FADHIGA SUBULAHA
Golayaasha bulshada Somaliland oo si qoto dheer u gorfeysey ololaha loogu tartamaayo hogaanka wadanka ayaa waxay ku ogaadeen in saddex aqal oo kala ah maxkamada sare, komishanka doorashada iyo hogaanka guurtida ay wadaan olole iyo wax is weydaaris loogu tallo galay in intay doonto ha qaadatee lagu hubsado xisbiga kulmiye kursiga hogaanka wadanka.
Goloyaasha bulshada iyo jaamacadaha ayaa dib u eegis ku sameeyey xogaha la soo helay si looga ambaqaado xaqiiqada oo la iska illaaliyo caadifad iyo deg deg. Waxay goloyaashaasi xaqiijiyeen in halgan weyn ay saddexdan dhardhaar wadaan oo ay ku doonayaan wax aan habayaraatee dan u ahayn Somaliland hase yeeshee iyagu ay dan moodeen oo ku qotonta waxa loo yaqaan “selfishness” ama hunguri.
Waxaa goloyaashu ay ogaadeen in illaa hadda uu afar fadhi oo qarsoodi ah ay yeesheen saddexdan dhardhaar. Waxa kaloo la ogaadey in dhardhaar kale oo mus-dambeedka ugu jiro kooxdan, kaasoo ah Hogaanka ciidanka Booliska. Waxa la hayaa telefoono dhawr oo sir badan kashifaaya dhinaca u heelanka ama taageerista qaawan ee loo doonayo in kulmiye meeshan uu sii joogo.
Si kastaba ha ahaatee goloyaasha bulshaweynta waxay digniin culus hawada u marinayaan Afartaas kor ku xusan, waxayna si naxariis leh, sharafna ku dheehantahay uga digayaan in afartaasi ay si dhaqso ah u joojiyaan arrimahaas khatarta ku ah jiritaanka Somaliland. Waxay si walaaltinimo ku jirto uga codsanayaan afartaas huwanta ah in ay u naxariistaan ummada soo daashey.
Asxaabta waxa dhamaan laga codsanyaa in ay dhawraan shuruucda doorashada xorta ah, illaaliyaan nabadgelyadda, adkeeyaan xidhiidhka bulshada, iska fogeeyaan wax allaale wixii carqaladeynaya habsami us socodka geediga doorashada. Waxa goloyaasha bulshoweynta iyo jaamacadaha ay digniin gaar siinayaan Komishanka oo weli gacmaha kula jira foolxumo iyo abuuris colaadeed.
Waxay goloyaasha bulshaweynto iyo jaamacadushuba isla garteen in sida ugu dhaqso badan loola xidhiidho hay’adaha caalamiga ah, qoraal hordhac ahna loo tabiyo gudida nabadgelyada qaramada midoobey (UN security council) loona cadeeyo in laga hortago Ruwaandhadii labaad in ay ka dhacdo goobta Somaliland.
Badbaadada Somaliland waxay hadda gacanta ugu jirtaa Afartaas dhardhaar oo axdi ku galey in ay meel mariyaan, muquuniyaanna cid allaale ciddii wajahda. Waxay bulsho-weynta Somaliland si sharaf leh uga baryayaan kooxahaas sharafta leh in ay inoo dhawraan nabada iyo barwaaqada Eebe inna siiyey.
Tallabada xigta baaqan ee bulshweyntu qaadeyso waa sidan:
1. Banaan-bax nabadeed oo taageerayaa xasiloonida ummadda
2. Gudbin qoraal codsi in Caalamku ku lamaaneeyo khubaro ajanabi ah afartan gole
3. In Caalamku naga caawiyo dhegeysiga telefoonada iyo xakameynta muddada doorashada iyo tirinta
4. In kamarada qarsoon lagu xidho meelaha muhiimka ah
5. In Gudi gaar ah loo sameeyo tirinta codadka ummadda
6. In loo fududeeyo saxaafadda xaqiiqo-raadinta, gudashada, isudubaridka, iyo tabinta.
7. In dhaar la mariyo dhamaan afartan gole. (Komishanka, Maxkamada sare, Hogaanka guurtida iyo hogaanka Booliska)
8. In dib loo fiiriyo guddida dooda dhextaal saddexda hogaamiye iyo ku-xigeennadooda. Waxay bulsha soo dhaweyneysaa in lagu lamaaneeyo Ajanabi.
9. In amaanka xuduudaha la adkeeyo
10. In TVga qaranka si xaq ah loo adeegsado dhinaca doorashada
Baaqan iyo digniintan oo af ingiriis iyo carabi ku qoran yaa soo socda
« SAWIRO. Shacabka Magaalada Muqdisho ayaa Galabta socod Baroor diiqa isugu soo baxay Banaanka Daljirka Dahsoon ee Magaaladaasi.
Hanjabaadii ugu kululeyd waxa jeedinayaa halyeygii guurtida:Qalinkii A. O. Amir »